Amaqela aphambili entlanzi | Ngeentlanzi
Amaqela aphambili entlanzi
Iintlanzi zahlukile ngokuba nazo iimpawu ezithile ubume bendawo abahlala kuyo. Ngesi sizathu sinokufumana iintlanzi zamanzi amatsha, iintlanzi zetyuwa, iintlanzi ezikweleenjiko, iintlanzi ezibandayo, phakathi kwamaqela aphambili. Udidi lwayo lubhekisa kwezinye iimpawu zomzimba.
Banokuhlelwa amaqela amathathu amakhulu Phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi zezi: iintlanzi ezinamathambo, iintlanzi ezinqabileyo (iintlanzi ezingenamhlathi) kunye nentlanzi i-chondrichthyan, ezizintlobo zentlanzi.
Ngaphakathi I-bony fish kukho iindidi ezininzi, kwaye olona phawu lwayo lubalulekileyo kukuba amathambo ayo aqaqambile, njengoko sibona kwimvubu okanye kwintlanzi yohlaza yaselwandle. Banomlomo obekwe ekupheleni kwentloko yabo kwaye ke malunga namaphiko kufuneka sitsho ukuba ziyahluka kakhulu nangona uninzi lwazo luphantsi ngokupheleleyo. Zizilwanyana ezitya inyama kwaye zondla ii-mollusks kunye ne-crustaceans.
Los Intlanzi yecyclostome Zizinto ezingenamhlathi phakathi kwezilwanyana ezinethambo lomqolo amaqela azo aphambili ziziphatho zezibane, ezaziwa ngcono njengesibane solwandle, esizifaka emzimbeni wezinye iintlanzi ukuze zikrwele inyama yazo kwaye zifunxe igazi lazo kunye hagfish Ezi zinto zivelisa izixa ezikhulu zencindi eshinyeneyo, ekwaziyo ukubopha imizimba yeentlanzi ezinkulu zibe ngamaqhina. Ziye ziphawuleke ngomlomo kunye namazinyo amile okomlilo.
Los Intlanzi enkulu Banophawu lokuba nesifo sentlala kwaye uninzi lwazo zinamaxolo abukhali kakhulu anokunika umbono wokuba ngamazinyo. Ngaphakathi kweli qela sifumana ookrebe kunye nemitha, kuba sithetha ngolunye lwezona zilwanyana ziphilayo zaselwandle zikhoyo.
Zonke Intlanzi ye-cartilaginous zizilwanyana ezitya inyama kwaye uninzi lweentlobo zitya amaxhoba aphilayo, nangona ezinye iintlobo zondla kwintsalela yezilwanyana ezifileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Amaqela aphambili entlanzi
Iimpawu ngokubanzi iintlanzi zeGuppy